Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Oo Muqdisho ay kusoo dhoweeyeen xildhibaano mucaarad ah – Radio Daljir
Diseenbar 10, 2018 11:00 b 0
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee looga bartay hadalada weerarka ku ah dowladda faderaalka ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho, isagoo ay soo dhoweeyeen xildhibaano katirsan baarlamaanka oo mucaarad ku ah xukuumadda.
Siyaasigan ayaa waxaa uu hadal ujeediyay dadkii iyo xildhibaanadii soo dhoweeyey, isagoona ku eedeeyey madaxda Villa Soomaaliya inay ku fashilmeen hogaaminta dalka.
Soo dhowayn ayaa kasocota degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Dib ugu laabashadiisa Muqdisho ayaa waxaa ay kusoo beegmaysaa iyadoo uu cirka isku shareeray saacadihii lasoo dhaafay khilaafka baarlamaanka iyo mowshinka ay ka keeneen madxwaynaha.
Madaxwaynaha musharaxa ah ee Puntland Cabdiwali Gaas oo magacaabay taliyaha doorashada